बिर्ता ज्योतीमा छुट सुबिधा लिनेको संख्या अधिक, बुधबारसम्म ९ सय जना जेष्ठ नागरिकले सेवा लिए – onlineyuba
बिर्ता ज्योतीमा छुट सुबिधा लिनेको संख्या अधिक, बुधबारसम्म ९ सय जना जेष्ठ नागरिकले सेवा लिए
२०७७ कार्तिक ५, बुधबार १८:१८
दमक — झापाको दमकस्थित बिर्ता ज्योती आई केयर प्रालीले विश्व दृष्टि दिवसका अवसरमा आँखाका बिरामीलाई दिएका बिभिन्न छुटहरु आजदेखी सकिएको छ । गत असोज २३ गतेदेखी आई केयर प्रालीले १५ बर्षभन्दा साना बिद्यार्थीहरुका लागि र ६० बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरुका लागि निशुल्क आँखा परिक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै अन्य सेवामा समेत बिशेष छुटको व्यवस्था गरिएको थियो भने ओपीडि निशुल्क गरिएको थियो । यो अवधिमा ९ सय जना जेष्ठ नागरिकले सुबिधा लिएको अस्पतालका सञ्चालक मध्येका एक मोती बरालले जानकारी दिए । यस्तै १५ बर्षभन्दा साना बिद्यार्थीहरुका लागि गरिएको छुटको सुबिधा लिनेको संख्या २ सय ९० रहेको बरालले जानकारी गराएका छन् ।
बिर्ता ज्योती आई केयर प्रालीले छोटो समयमै आँखाका बिरामीहरुलाई सहज र सर्बसुलभ सेवा दिएर बिरामीको विश्वास जित्न थालेको छ । गत सालको माघ ५ गतेबाट सेवा आरम्भ गरेको बिर्ता ज्योतीले १५ बेडको आँखा अस्पतालका स्विकृती समेत पाएर सेवा समेत सुरु गरेको हो ।
बिर्ता ज्योतीमा अहिले ३ जना आँखा बिशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध रहेको बताईएको छ । डा. राजेश प्रधान, डा. चाँदनी प्रधान र डा.प्रनिता ढकालको दैनीक सेवा उपलब्ध रहेको बिर्ता ज्योती आई केयर प्रालीले जनाएको छ । मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, आँखाको टेढोपन, मासु पलाएको र आँखा सम्बन्धी अन्य रोगहरुको यहा उपचार हुने गरेको छ ।
बिर्ता ज्योती आई केयरमा झापाको गौरीगञ्ज, गौरादह ईलामको चुलाचुली, मोरङको मधुमल्ला, उर्लाबारी, पथरी कानेपोखरीसम्म्का आँखाका बिरामीहरु आउने गरेका छन् । आगामी दिनमा बिर्ता ज्योती आई केयरले रेटिनाको सेवा समेत थप गर्ने योजना बनाएको सञ्चालक मध्येका एक मोती बरालले जानकारी दिए । बरालका अनुसार यस बिर्ता ज्योती आई केयरलाई टिचिङ ईन्स्टिच्यूटको रुपमा बिवकास गर्ने समेत योजना छ । त्यसका लागि आवस्यक प्रकृया र तयारीका कामहरु भईरहेको बताईएको छ ।